तिथि मेरो पत्रु »7तपाईंको मन उडा ल्याउने सेक्स तथ्य
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 10 2021 |2मिनेट पढ्न
सेक्स. हामी सबै यो थाहा र हामी सबै भन्दा यो छ. तर हामी साँच्चै सेक्स के थाह छ? हामी orgasms थाह कस्तो, लिंग आकार, र sexercise? हामी को एक सूची संकलित छन्7श्रद्धा आफ्नो मित्रहरुलाई र प्रेमी छोड्छ त्यो अचम्मको तथ्य.
तथ्य #1: जब खडा, औसत लिङ्ग आकार छ5गर्न 5.7 लामो इञ्च
अध्ययन पेरिस राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका गरेको हाल अध्ययन अनुसार, सबै भन्दा मान्छे उपाय5गर्न 5.7 इन्च लामो र 3.9 गर्न 4.1 जाग्यो जब वरिपरि. लोकप्रिय धारणाको त्यसैले विपरीत, अधिकांश पुरुषहरु एक छैन7इन्च लिंग.
तथ्य #2: जब जाग्यो महिला योनी वास्तवमा फैलिएको
एक औसत योनी सामान्यतया छ3गर्न4लामो इञ्च. जाग्यो जब यो वास्तवमा दुई सय प्रतिशत सम्म विस्तार गर्न सक्छन्, अनुसन्धान अनुसार. यस सन्दर्भमा त्यसैले, आकार वास्तवमा कुरा छैन.
तथ्य #3: महिला orgasms सम्म टिक्न सक्छ4समयमा रूप मा लामो समय पुरुष
औसत पुरुष संभोग बारेमा रहन्छ6सेकेन्ड एक महिला बारे रहन्छ, जबकि 20.
तथ्य #4: जला मदत गर्नेछ सेक्स को तीस मिनेट 200 क्यालोरी
नारी दिवस पत्रिका मा प्रकाशित एक लेखमा अनुसार, सेक्स उच्च-क्यालोरी जल हुन सक्छ. चाबी सेक्स तातो बनाउन र अब पछिल्लो छ. शोक र कराह रही थप क्यालोरी बर्न मदत गर्न सक्छ. अर्को तरिका पदहरुलाई स्विच गर्न र पनि स्थिति बढाउनु छ. उदाहरणका लागि, तपाईं माथि हो भने एक पेट नर्तकी जस्तै आफ्नो कम्मर बढ प्रयास. विशेषज्ञ पनि सेक्स को समयमा एक संभोग हासिल गर्ने महिलाले बढी क्यालोरी बर्न गर्छन भन्न.
तथ्य #5: एक पुरुष संभोग समयमा स्खलन को औसत गति प्रति घण्टा बीस-आठ मील छ
शीघ्र प्रेतहरू; तथापि, शुक्राणु योनी प्रवेश पल्ट उनि आमूल धीमा. यो शुक्राणु लिन्छ5मिनेट पनि बनाउन6गर्भाशय ग्रीवा लक्ष्य हासिल इन्च यात्रा. यो पनि गर्न शुक्राणु लिन सक्छ 72 घन्टा एक अन्डा पाउन, मर्कूस स्वाधीनतामा अनुसार, मनोवैज्ञानिक र लैंगिक स्वास्थ्य को लागि संस्थान निर्देशक.
तथ्य #6: सरल स्थिति सबैभन्दा तीव्र orgasms प्रदान
तपाईं एक मन-उड्ने लागि देख रहे भने, ओछ्यानमा-तेजस्वी मूल कुराहरु संभोग छडी. सेक्स शिक्षक डोराएन Solot अनुसार, नयाँ प्रयास गर्दा, बढी जटिल स्थिति, आफ्नो ध्यान वास्तविक सेक्स बनाम सन्तुलन पाउन प्रयास मा छ. परम्परागत सेक्स स्थिति केही संशोधन संग, तपाईं तिनीहरूलाई अझ orgasmic बनाउन सक्छ.
तथ्य #7: योग इच्छा वृद्धि गर्न मदत गर्न सक्छ, orgasms, र यौन सन्तुष्टि
महान् सेक्स परम मन-शरीर अनुभव छ, र त योग छ. मात्र योग ठूलो तनाव रिलीवर छ तर केही स्थिति आसन सुधार, लचकदार, रगत प्रवाह, र आफ्नो हृदय खोल्न – एक गर्म सेक्स जीवन को लागि सबै ठूलो. योग पनि वर्तमान मा mindfulness र जीवित सिकाउन मदत गर्छ, ठूलो सेक्स मा राम्रो सेक्स बारी मदत गर्छ भनेर दुई अन्य कुराहरू.